Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड प्रयोग गरी वेबसाइट प्रदर्शन प्रदर्शन र गति परीक्षण गर्दै
प्रत्येक एसईओ प्रदाता, कि एजेन्सी वा फ्रीलान्स एसईओ प्रबन्धकलाई थाहा छ कि वेबसाइट प्रदर्शन र प्रयोगकर्ता अनुभवले खोजी ईन्जिन र रूपान्तरण दरहरूमा वेबसाइट रैंकिंगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कुञ्जीशब्दहरू, श्रेणीकरण र ट्र्याकिंग लिंकहरू जाँच गर्ने उपकरणहरू जस्तै, त्यहाँ उत्कृष्ट उपकरणहरू छन् जसले तपाईंलाई तपाईंको साइटको गति अप्टिमाइज गर्न र सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
यस गाईडमा, हामी एक धेरै शक्तिशाली एसईओ उपकरण समीक्षा गर्नेछौं, जुन तपाईंको साइटको गति र प्रदर्शनको परीक्षण गर्न सबै भन्दा राम्रो उपकरण हो र बजारमा अन्य सबै सामान्य रूपमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको प्रदर्शन गर्दछ। उपकरणलाई The भनिन्छ समर्पित SEO ड्यासबोर्ड।
SEO समर्पित ड्यासबोर्ड के गर्छ?
एसईओ समर्पित ड्यासबोर्ड एक एसईओ उपकरण हो जुन २०२१ मा सुरुमा Semalt विशेषज्ञहरू द्वारा विकसित गरिएको थियो। यस उपकरणले एसईओ एजेन्सीहरूको बीचमा वेब गति सुधार गर्ने प्रक्रियामा धेरै प्रतिष्ठान प्राप्त गरेको छ किनकि यसको प्रदर्शन र एक पटकमा धेरै कार्यहरू गर्ने क्षमताको कारण। को SEO समर्पित ड्यासबोर्ड उपकरण कुनै श on्का बिना यसको बहु सुविधाहरु को लागी बजार मा सबै भन्दा राम्रो उपकरण हो। यसको एक सुविधिले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइटको गति र प्रदर्शन मापन गर्न अनुमति दिन्छ। उपकरण आफैंसँग धेरै विविध क्षमताहरु छन्। आज हामी तपाईको साइटको गति सुधार्न आवश्यक र आवश्यक आवाश्यक पर्ने यस उपकरणको एक हिस्सालाई सम्बोधन गर्दैछौं। जे होस्, यस लेखको अन्त्यमा, हामी यस उपकरणका अन्य सुविधाहरूमा छोटकरीमा जान्छौं।
मूल रूपमा, यो SEO समर्पित ड्यासबोर्ड सुविधा हामी कसरी पृष्ठ लोड हुँदैछ भनेर जाँचको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं। पृष्ठ लोड गर्दा, केही महत्त्वपूर्ण मेट्रिक्स रेकर्ड हुन्छ र cataloged, र त्यसपछि ग्राफ, चार्ट, र तालिकाको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ जुन पृष्ठ लोड मुद्दाहरू र ढिलाइ विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईं विश्लेषणको धेरै पक्षहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ जुन SEO समर्पित ड्यासबोर्डले प्रदर्शन गर्दछ। उदाहरण को लागी, कुन प्लेटफर्म प्रयोग गरिने, कुन उपकरण बाट, कुन ब्राउजर बाट परीक्षण गरिने छ।
तर के हामी यहाँ छलफल गर्छौं यस उपकरणको सबै सम्भावना र क्षमताहरूको सरलीकरण हो। SEO समर्पित ड्यासबोर्ड उपकरण धेरै धेरै गर्न सक्दछ, यति धेरै कि एक पनि 200 पृष्ठहरु को एक किताब लेख्न सक्छ यसको हरेक सुविधाहरु लाई व्याख्या गर्न को लागी। जे होस्, यस उपकरणको बारेमा पुस्तक नपढाईकन तपाइँ यसलाई सजिलैसँग तपाइँको साइटको प्रदर्शनलाई अनुकूलित गर्न र सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनभने उपकरण त्यस बिन्दुमा विकसित गरिएको छ जहाँ एसईओ शुरुवातकर्ताहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्।
किन एसईओ ड्यासबोर्ड वेग र प्रदर्शन परीक्षणको लागि अन्य एसईओ उपकरणहरू भन्दा राम्रो छ?
तपाईं मध्ये धेरैले उपकरणहरूसँग गति र प्रदर्शन परीक्षणहरू गर्नुहुन्छ जस्तै Ubersuggest, Ahrefs, Semrush। यी बजारमा प्रसिद्ध SEO उपकरणहरू हुन्। तर यी उपकरणहरूसँग धेरै सीमित सुविधाहरू छन्, र यही हो एसईओ समर्पित ड्यासबोर्डलाई प्रदर्शन र दक्षतामा शीर्ष स्थान लिनको लागि।
Semalt को समर्पित SEO ड्यासबोर्ड र ट्रेन्डी विश्लेषण उपकरणहरू जस्तै Ahrefs, Ubersuggest र Semrush बीचको भिन्नता पत्ता लगाऔं।
एसईओ ड्यासबोर्ड र अन्य उपकरणहरू बीच यी भिन्नताहरू देखेर हामी केवल यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि कुनै पनि एसईओ कार्य गर्नको लागि यो सब भन्दा सटीक उपकरण हो।
अब, समर्पण एसईओ ड्यासबोर्डले तपाईंलाई तपाईंको साइटको प्रदर्शन र लोडि speed गति जाँच गर्न मद्दत गर्दछ कि कसरी हेरौं।
समर्पित एसईओ ड्यासबोर्ड प्रयोग गरी तपाईंको साइटको गति जाँच गर्नुहोस्
एउटा उदाहरण हेरौं हामी प्रत्येक चरण अनुसरण गरेर त्यो गर्नेछौं।
सुरू गर्नका लागि तपाईले पहुँच गर्न आवश्यक पर्दछ SEO डेडिकेटेड ड्यासबोर्डको डेमो ईन्टरफेस। त्यसपछि अडिट सेक्सनमा पेज स्पीड एनालाइजर चयन गर्नुहोस्।
त्यसो भए, उपकरणको ईन्टरफेसको खोजी पट्टीमा तपाईंको साइटको डोमेन नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्।
अब तपाइँ खोजी सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र केहि सेकेन्ड पछि तपाइँ परिणामहरू यस फारममा देखा पर्नुहुनेछ:
WebPageTest परिणामहरूको विश्लेषण
एक पटक परीक्षण समाप्त भएपछि तपाईले पाउनुहुनेछ कि तपाईले धेरै जानकारी प्राप्त गर्नुभयो, यस गाइडको दायरामा मैले कभर गर्न सक्ने भन्दा बढी। अबको लागि मुख्य चीजहरूमा ध्यान केन्द्रित गरौं।
स्क्रिनको माथि दायाँमा तपाईले देख्नु भएको पहिलो कुरा प्रदर्शनको स्तरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा स्कोरहरूको सेट हो। यसले केही आधारभूत अप्टिमाइजेसन कार्यहरू कभर गर्दछ जुन प्रत्येक साइटसँग प्रासंगिक छन् र कुनै पनि अन्य स्कोर जसले अधिक इनामदायी परीक्षणलाई जायज ठान्दछ।
यी परिणामहरूको आधारमा, तपाईं तपाईंको साइटको लोडिंग गति सुधार गर्न के कदम चाल्ने भनेर जान्न सक्नुहुन्छ।
हामीले भर्खर एसईओ ड्यासबोर्डको साथ लोडिंग गति कसरी विश्लेषण गर्ने भनेर पत्ता लगाएका छौं।
अब हामी कसरी यो उपकरणको साथ हाम्रो साइटको प्रदर्शन विश्लेषण गर्न सक्छौं पत्ता लगाऔं।
समर्पित SEO ड्यासबोर्ड प्रयोग गरी तपाईंको साइटको प्रदर्शन जाँच गर्नुहोस्
सुरू गर्नका लागि तपाईले एसईओ समर्पित ड्यासबोर्डको डेमो ईन्टरफेस पहुँच गर्नु पर्छ। त्यसपछि चयन गर्नुहोस् वेबपृष्ठ विश्लेषक अडिट सेक्सनमा।
समर्पित SEO ड्यासबोर्डका अन्य कार्यक्षमताहरू पत्ता लगाउनुहोस्
हामीले सुरूमा नै भनेझैं, SEO समर्पित ड्यासबोर्डमा अन्य सुविधाहरू छन् जुन हामी तपाईंलाई पछि पत्ता लगाउन आमन्त्रित गर्दछौं।
गुगल SERP विश्लेषण
यस DSD सुविधा सेट तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु Google SERP मा आफ्नो वेबसाइट को स्थिति साथै शीर्ष पृष्ठहरु र कीवर्डहरु को लागी तिनीहरु को लागी देखाउन अनुमति दिन्छ। यसका साथै, यो विश्लेषण उपकरणले तपाईंलाई तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको गहन विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। यस विश्लेषणको नतिजाले तपाईंलाई आवश्यक कोन्चमा मुख्य प्रतिस्पर्धीहरू चिन्न, र उनीहरूको ट्राफिक-उत्पादन कुञ्जी शब्दहरू पनि उनीहरूको पदोन्नति रणनीतिको कल्पना लिन जान्न अनुमति दिन्छ।
टेक्निकल एसईओ अडिट
यो हाम्रो समर्पित SEO ड्यासबोर्डको अर्को प्रतिस्पर्धी लाभ हो। यस सुविधाले तपाईंलाई पूर्ण वेबसाइट विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ। टेक्निकल अडिटबाट सबै कुरा:
यो सबै सुविधामा उपलब्ध छ र अब एकै छाना मुनि छ। तपाइँका ग्राहकहरु लाई यो मन पर्छ!
प्रत्येक पटक SEO सेवा प्रदर्शन भइरहेको रिपोर्ट गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।
रिपोर्ट केन्द्र उपकरण नवीनतामा केन्द्रित हाम्रो समर्पित SEO ड्यासबोर्डको अर्को अनौंठो सुविधा हो। यो व्यक्तिगत रूपमा तपाइँको प्रत्येक ग्राहकहरु को लागी रिपोर्ट वितरण कार्यक्रम बनाएर कार्य गर्दछ। तपाइँको व्यावासायको लागि यस उपकरणको लाभ निर्विवाद छ किनकि यसले तपाइँलाई तपाइँको ग्राहक र तपाइँको लोगो र ब्रान्ड नामको साथ पूर्ण एसईओ रिपोर्टहरू प्रदान गर्दछ।
DSD प्रशासन प्यानल
DSD प्रशासन प्यानल एक सबै इन-वन प्यानल हो जुन मुख्य रूपमा तथ्याcking्कन ट्र्याकिंग, अनुकूलन सेटिंग्स र लिड्स प्रबन्धनको लागि हो। त्योले भन्यो, तपाईको टोलीको प्रत्येक सदस्यलाई पहुँच प्रदान गरी तपाईलाई यहाँ चाहिने जति खाताहरू सिर्जना गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
तपाइँ यी आधारभूत प्यानल विकल्पहरू प्याकेजमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, जब तपाई ग्राहक आधार विस्तार गर्न र कुशलतापूर्वक आफ्नो नेतृत्व प्रबन्ध गर्न चाहानुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यसको चिन्ता लिनुपर्दैन, मात्र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले हाम्रो लीडगेन एड-अनहरू विचार गर्नुभयो।
कसरी समर्पित SEO ड्यासबोर्ड तपाइँको व्यवसाय को लागी काम गर्दछ?
यदि तपाईं एक एसईओ कम्पनी, डिजिटल मार्केटिंग सेवा, वेब डिजाइन, होस्टिंग सेवा, वा समान व्यवसाय चलाउनुहुन्छ भने, तपाईंलाई वेबसाइटहरू विश्लेषण गर्न र तपाईंको पार्टनरहरूलाई अप-टु-डेट जानकारी प्रदान गर्न SEO लेखा परीक्षण गर्न केही व्यावसायिक उपकरणहरू आवश्यक पर्दछ। हाम्रो एसईओ ड्यासबोर्ड तपाईलाई आवाश्यक मात्र छ। यसले सुविधाहरूको सेट समावेश गर्दछ जुन तपाईंको ग्राहकहरूले तपाईंको कम्पनीको डोमेन नामको साथ नि: शुल्क प्रयोग गर्न सक्दछन्।
हाम्रो निजीकृत सेतो लेबल ड्यासबोर्डबाट कसले लाभ लिन सक्दछ?
एसईओ समर्पित ड्यासबोर्ड विशेष रूपले एसईओ एजेन्सीहरू र स्वतन्त्र एसईओ पेशेवरहरू साथ साथै Semalt पुनर्विक्रेताहरु लाई हटाउन डिजाइन गरिएको एक उपकरण हो।
त्यसैले यदि तपाईं हुनुहुन्छ:
एक एसईओ एजेन्सी, समर्पित विश्लेषण उपकरणहरू हातमा साथ, तपाईं सजिलै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर खडा हुन सक्नुहुनेछ जबकि तपाईंको ग्राहक आधार बढाउँदै र तपाईंको व्यापार कभरेज विस्तार गर्दै।
एक एसईओ फ्रीलांसर, तपाईं ती सबै अनुचित मूल्य विश्लेषण सेवाहरु लाई बिदा भन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको कुनै मूल्य लाउँदैन। त्यसोभए, Semalt टेक्नोलोजीमा आधारित हाम्रो उन्नत नि: शुल्क SEO उपकरणमा स्विच गर्ने समय आएको छ कि जसले तपाईंको ग्राहकहरूको SEO लाई बढावा दिन र मूर्छा र दिगो परिणाम ल्याउनमा मद्दत गर्दछ।
एक Semalt पुनर्विक्रेता, र तपाइँ अर्को ग्राहकहरु संग तपाइँको ग्राहकहरु संग व्यापार सम्बन्ध लिन को लागी उत्सुक हुनुहुन्छ, हाम्रो समर्पित सेतो लेबल ड्यासबोर्ड-हुनुपर्दछ विकल्प। यो एक ठूलो थप हुनेछ Semalt पुनर्विक्रेता कार्यक्रम हामी प्रस्ताव गर्छौं। Semalt का साथ साझेदारी गरेर आफ्नो सफलता को उन्नत गर्नुहोस्।
नि: शुल्क १--दिन परीक्षण प्राप्त गर्नुहोस्
आफैलाई SEO समर्पित ड्यासबोर्डसँग परिचित गर्न र यसको प्रतिबद्ध गर्नु अघि यसको प्रदर्शनको साक्षी दिन, एक १ 14-दिन नि: शुल्क परीक्षण तपाईंलाई दिइन्छ। यस अवधिमा, तपाईंसँग तपाईंको परीक्षण अवधिमा मानक प्याकेजमा समावेश सबै मूल्यवान सेवाहरूको असीमित पहुँच हुनेछ। चाहे तपाईलाई ग्राहक सोधपुछ ट्र्याक गर्न वा सम्भावित डाटा प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ, हामीसँग तपाईलाई चाहिने सबै चीज छ।
तपाईं उन्नत SEO समर्पित ड्यासबोर्ड विकल्पहरू र सुविधाहरूमा धेरै धेरै घण्टा खर्च गर्न सक्नुहुनेछ।
म भन्दछु कि SEO समर्पित ड्यासबोर्ड एक उपकरण हो जुन बाँच्न गाह्रो छ, निश्चित रूपमा अप्टिमाइजेसन र वेबसाइटको गतिको फ्रिकको लागि। यसले साइट लोड गर्न र डिबग समस्याहरू पत्ता लगाउन र खोज ईन्जिनमा उच्च स्तर र राम्रो र अधिक सहि अनुभवको अनुभवमा उच्च नेतृत्वको लागि यी नेतृत्व फिक्स गर्न सम्भव बनाउँदछ।
मलाई आशा छ कि SEO समर्पित ड्यासबोर्डमा यस समीक्षाले तपाईंलाई डाइभिंग र तपाईंको साइटलाई अनुकूलन गर्न सुरु गर्न राम्रो पर्याप्त आधार प्रदान गर्दछ, चाहे वर्डप्रेस साइट होस् वा नहोस्।